ဆရာမြတ်ထွဋ်ခေါင်: July 2018
ကျွန်တော် ဗေဒင်ဆရာဘဝ ( ၇ )
ဟိုးတုန်းကပေါ့လေ ကျွန်တော်ကဗေဒင်ဟောခန်းဖွင့်မယ်ဆိုပြီး အိမ်က ခလေးတွေစာကြည့်စားပွဲကိုထမ်း
ချလာတာ မှတ်မိသေးတယ် ဈေးထဲကသူငယ်ချင်းက
လေ အမြင်မတော်တော့ ကိုထွဋ်ရာ ခင်ဗျားဒုက္ခမသေး
ပါလား ကျွန်တော်အိမ်မှာ ထိုင်ခုံတစ်ခုံရှိတယ်လာယူ
ပါ ကျွန်တော်တို့လည်းမသုံးဘူး ခင်ဗျားထိုင်တဲ့ကော်
မကြီးဘူး ထိုင်ခုံက ဖင်ထိုင်တဲ့နေရာမှာပျဉ်ပြားမရှိ
တာခက်တာ ဒါကအရေးမကြီးပါဘူး ပျဉ်ပြန်ခင်းရ
တာဘဲ ဒီလိုနဲ့အဲဒီခုံကြီးထမ်းလာတာ အိမ်ရောက်
အဟောင်းကိုလွှနဲ့ဖြတ်ပြန်ခင်း ဆေးမှု တ်
လာပြီ ခုံအသစ်နဲ့ဗေဒင်ဆရာ ဘာပြောဦးမလည်း
အကုန်ဝယ်မဖတ်နိုင်တော့ တစ်ခန်းကျော်က ဗေဒင်
ကျေးဇူး ရှင်တွေပါ ခုံစုတ်လေးပေးသနားတော်မူ
ဒီလိုနဲ့ တစ်ယောက်ကို ၂၀၀ ကျပ်ပေါ့နော် ဗေဒင်
တွက်ခဲ့တာ တချို့  ကလည်း အဆစ်တောင်းတော့
ပေးရတယ် အပြင်စီးပွားရေးတစ်ဖက် ဗေဒင်တစ်ဖက်
ပေါ့ အိမ်ရှင်မက နားလည်းပေးရှာပါတယ် သူစုထား
ရပါတယ် နောက်တော့ အခန်းကဈေးတက် အိမ်ငှား
ဘဝနဲ့ဆိုတော့ တောင်ဥက္ကလာ ၁၀ ရပ်ကွက်မှာ
ဆိုရေဝင်တယ် ပတ်ဝန်းကျင်က ကူညီကြပါတယ်
ဒါပေမဲ့ ကံကမပေးချိန်ဘာမှဖြစ်မလာဘူး ပညာနု
နေတယ် တနေ့ အဲဒီနေ့က ကျွန်တော်ကဈေးက
အဖေက ကျွန်တော်ရောက်ရောက်ခြင်း ဟေ့မောင်
ထွဋ် မင်းဦးလေးက စနေသက်ရောက်ထဲရောက်
နေလို့ဘုန်းကြီးသွားဝတ်မလို့တဲ့ မင်းတို့လှူ ချင်
ကျွန်တော်က စနေသက်ရောက်က အညံ့ထဲမှာအဖေ
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx
အချိန်က တစ်လခွဲလောက်ရှိမယ်ထင်ပါသည် ထိုဗေဒင်
ဆရာကြီးထောင်ကြသွားသည့်သတင်း ----- -----
သာသနာသန့်ရှင်းနှင့်ကြူံ သွားပါသည် သြော် စနေ
သက်ရောက်မှာ ကံနိမ့်နေတာ လူတကာကန်တော့
လွယ်အိပ်တလုံးနဲ့ ဟောခန်းကပြန်လာတဲ့ကျွန်တော် အိမ်ထဲကိုဝင်လိုက်တော့ တအိမ်လုံးတိတ်ဆိတ်နေတာ
ကြက်ဥ ၁၀၀ တန်သေးသေးလေးတစ်လုံးကိုကြော်
``ဟေ့ရှင်မ အစောကြီးအိပ်နေတာလား နေမကောင်း
သူမက တစ်ချက်မျှပင် ကျွန်တော်အားလှည့်မကြည့်ပါ
အင့် အဟင့် ''
ငို သံလိုလိုကြားလိုက်မိသဖြင့် နောက်သို့အသာ
အယာပြန်လှည့်ကာ ဟေ့ ရှင်မ မင်းငိုနေတာလား
ရာ သူမမှာ ရုပ်တရက် ရှိုက်ကြီးတငင်နှင့် ကျွန်တော့်
အင် ဘာဖြစ်လို့လည်းရှင်မ ရယ် အလန့်တကြားရှိ
လိုက်တာ အကိုတဲ့ ဒီလကုန်ဆိုင်လခပေးရမှာတဲ့
ရှိတဲ့ရွေ တစ်ကျပ်သား ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဆိုင်လခ
တဲ့ အိမ်မှာလည်း ဆန်ကုန်နေပြန်ပြီတဲ့
အကိုရယ်တဲ့ အကိုဗေဒင်ဟောခ ခြောက်ပြားတပဲ
ကျွန်တော်အသံ နည်းနည်းကျယ်သွားလို့ ရှင်မ လန့်
ဟိုလေ အကိုကိုယ် ပုံမှန်ဝင်ငွေလေးရှာဘို့ပြောတာ
ပါ ကျမ ကိုတစ်မျိုးမထင်ပါနဲ့
အတွေးများစွာနဲ့ ငါ ဗေဒင်လောကကိုကြောခိုင်း
ရမှာလား ငါဘာလုပ်ရမလည်း ကားဘဲမောင်းရမှာ
လား မိသားစုအရေး xxx xxx xxx
ကာ xxx xxxxx xxxxx
ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အနှစ် ၂၀ ပညာ အုပ် ၁၀၀ ကျော်
ကျော် ဗေဒင်ကျမ်းများ ခဲတံတို တစ်ချောင်း အနား
ငါဘာဆက်လုပ်ရမှာလည်း xxxxx xxxxx
ရေးသားသူ Myat Htut Khaung at 7/30/2018 03:23:00 PM No comments:
ဟိုးတုန်းကပေါ့လေ ကျွန်တော်တို့ဗေဒင်လောကမှာက ကျမ်းပြုနိုင်မှဈေးကွက်မှာထိုးဖေါက်နိုင်မှ
ကျွန်တော်တို့လည်းစီနီယာကြီးတွေကို ဆရာကြီးတွေကိုဘဲအားထားနေရတာ သူတို့ရေးတဲ့ကျမ်းတွေကို
ကျောင်းဆရာတော် အိန္နိယပြန်အရှင်အိန္နာဝံသမထေတို့စာအုပ်တွေကတော့ ကျမ်းပြုအနေနဲ့လေ့လာခဲ့
ပါတယ် ရေးဟန်စတိုင်ကတော့ ဆရာကြီးရွှေဥဒေါင်းငွေဥဒေါင်း ဆရာမင်းသိင်္ခ ဆရာမောင်ထင် အစရှိတဲ့စာရေးဆရာကြီးတွေရဲ့ရေးဟန်ကိုယူခဲ့ပါတယ်
ရှင်အနေနဲ့သိခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး စာရေးဆရာတယောက်အနေနဲ့သိခဲ့တာပါ အဲဒီတုန်းက ၁၉၇၉
ခုနှစ်မှာပန်းချီဆရာ ကာတွန်းသုတနဲ့ကျွန်တော်တို့က တောင်ဥက္ကလာပဘုရားထိပ်က တရုပ်ကြီးလက်
ဖက်ရည်ဆိုင်မှာအမြဲတန်းလက်ဖက်ရည်သောက်နေကြတာ တနေ့ကြတော့ကိုသုတနဲ့အတူ လူတယောက်ပါလာတယ် အသက် ၄၀ကျော်လောက်ရှိမယ်ကိုသုတက ဟေ့မောင်ထွဋ် ဒီဆရာဝတ္ထုတွေငါရုပ်ပြဆွဲနေတာကွ သူနာမည်ကိုအောင်ထွန်း လို့ခေါ်
တယ် စာရေးတဲ့ကလောင်က မင်းသိင်္ခဘဲ ခုငါတို့မနုစာရီ ဇတ်လမ်းကိုရုပ်ပြစရေးမှာ ကျွန်တော်တို့က
လူငယ်တွေဘဲရှိသေးတော့ ဆရာမင်းသိင်္ခ၏ စတိုင်ကိုထိုစဉ်ကတဲကလိုက်မမှီခဲ့ပါ ဆရာသည်သူ၏
ဇတ်ကောင်ထဲကပုံစံအတိုင်း ဆံပင်ရှည်ထားသည်မုတ်ဆိတ်ထားသည် အဖြူ ဝတ်သည် ဆာဒူးတစ်
ယောက်ပုံစံ ကိုသုတ တို့ကျွန်တော်တို့က ဘောင်းဘီရှည် ကိုကျပ် အင်္ကျီနဲ့ ထိုအချိန်က လက်ဖက်ရည်
ကျွန်တော်က ပန်းချီနဲ့စာရေးတာဝါသနာထုံနေတော့သူတို့က ကျွန်တော်အတွက်တော့ သူရဲကောင်းတွေ
၁၅ နှစ်လောက်ရေးဖြစ်ပါတယ်ပန်းချီပညာကတော့အလှမ်းဝေးသွားခဲ့တယ်စိုင်းလားရှိုးတို့ ဧကရဇ်ပန်ချီအုပ်စုက သက်နိုင်တို့
နဲ့ကတော့ နှစ်အတော်ကြာတွဲဖြစ်ခဲ့တယ်မဟာဘုတ်ကျမ်းစထွက်ပြီး နောက်ကျွန်တေိာကိုဗေဒင်
လောကမှာလူသိများခဲ့ပါတယ် အင်္ဂဝိဇ္ဇာကျမ်းကတော့ထွက်တာမကြာသေးဘူး ယတြာလက်စွဲကျမ်းရေးနေတဲ့အချိန်မှာတော့ လုံးဝအချိန်မပေးနိုင်တော့တာနဲ့စာမူတွေရပ်ထားတာ တနှစ်ကျော်သွားပြီ
နောက်ပိုင်းစာရေးဘို့လုံးဝမလွယ်တော့တာ စာရေးဆရာကြီးတွေကိုလေးစားတယ် သူတို့မအားတဲ့
မရလည်းရေးခဲ့တာ ၁၀ စုနှစ်တစ်ခုပါဘဲဗေဒင်လောကမှာထိုးဖေါက်ဘို့နည်းစနစ်တွေအများ
ကြီးလေ့လာခဲ့ပါတယ် အများကြီးလည်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် ဒီနည်းတွေကိုကျမ်းစာအုပ်အဖြစ်ပြောင်းလည်းဘို့ကတော့အချိန်တစ်ခုတော့ပေးရဦးမှာပါ
ရေးသားသူ Myat Htut Khaung at 7/29/2018 04:20:00 PM No comments:
ကျွန်တော် ဗေဒင်ဆရာဘဝ ၂၆
ကျွန်တော်က အပတ်စဉ် ၃ သင်တန်း
ကို တောင်ဥက္ကလာပ ၁၀ ရပ်ကွက်ထဲကသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အိမ်မှာဖွင့်ဖြစ်တယ် ညပိုင်းသင်တာ
လူကတော့ ၆ ယောက် လူကြီးပိုင်းတွေဘဲ လူငယ်ဆိုလို့သင်္ဘောသားတစ်ယောက်ဘဲပါတာ အဲဒီမှာ
အတိုက်အခံတွေတအားပေါတာ တခြားဆရာတွေကလည်းသူသိ သူတတ်နဲ့ပညာဝင်ပြကြတာ စိတ်ကုန်
ဘို့ကောင်းတယ် နောက်တော့ဒီတပည့်တွေလည်းဘိုးတော်ယောင် နောက်လိုက်သွားကြတယ်
သူတို့က အင်္ဂဝိဇ္ဇာပညာကို မရှင်းတာ
ကျွန်တော်က သောကြာတိုင်မှာတြိစတု ကိုပြတယ်
ကြာသပတေး မိတ်က တနင်္ဂနွေ ဓါတ်က တနင်္လာဒီအတွဲလည်းဒီလိုဘဲ မိတ်နဲ့ ဓါတ်ကစားရင်
သာစည်ပင်းယဇောက်ထိုးကို သွားမချိန်နဲ့ တစ်ခုကိုအသုံးပြု ရင်နောက်တစ်ခုနဲ့မချိန်နဲ့ ကျွန်တော်တို့
က ပညာရှင်လိုင်း ပညာရှင်ဖြစ်ဘို့ဂဏန်းတွေစုန်ဆန်သိဘို့လိုတယ်
ဒီလိုနဲ့ တပည့်တွေလည်း ငါးသိုင်းများပြီး ဟင်းဟုန်တဲ့အဖြစ်ကိုရောသွားပါတယ် ONE WAY ဆိုရင်
အဲဒီ ၁၀ ရပ်ကွက်မှာ ဟောခန်းဖွင့်ဖြစ်တယ် ရီတော့ရီရတယ် ကျွန်တော်ကစားပွဲခုံမရှိလို့ လက်ဖက်ရည်
ဆိုင်က စားပွဲအပုတလုံးကိုအဟောင်းဈေးနဲ့ရှာဝယ်တပည့်တစ်ယောက်က ဈေးထဲက ပိတ်စတကိုက်စဝယ်
ပြီးလာဖုံးပေး ဆိုင်းဘုတ်ကိုဗီနိုင်းဆွဲ အဲလိုနဲ့ဟိုတစဒီတစ နဲ့ဟောခန်းလေးဖြစ်သွားတယ်
စဖွင့်တဲ့အချိန်က မိုးရာသီဆိုတော့ လမ်းကရေတွေကဟောခန်းထဲဝင်လာတော့ ဗေဒင်စားပွဲ အစုတ်ကလေး
ကိုကဗျာ ကရာ ကုတင်ပေါ်တင်စာအုပ်တွေရောဘဲညရောက်တော့ ကုတင်ပေါ် အကုန်တက်နေရတယ်
ဖိနပ်တွေ ရေမျောလို့ လိုက်ဆယ်ရသေးတယ်မနက်ရေကျသွားတော့ ရွံ့နှစ်တွေကျန်ခဲ့တာ ဗေဒင်
ဟောရင် ကုတင်ပေါ်တက်ဟောရတယ် ဟာသတွေဖြစ်လို့
ကျွန်တော်လည်းခြေအေးဝမ်းရောင်ဖြစ်ပြီးဆေးခန်းရောက်သွားတယ် အဲဒီတုန်းက အမျိုးသမီးကလက်
ဖက်ရည်ဆိုင်ဖွင့်တော့ ကျွန်တော်ဟောခန်းလူမရှိရင်သူ့ဆိုင်မှာဝိုင်းကူ ဧည့်သည်လာတော့စက်ဘီး
နဲ့ပြန်ပြေး ဘေးခန်းကလူတွေမှာထားရတယ်စီးပွားလုပ်ငန်းတွေစွန့်ပြီးဗေဒင်လောက အပြီးတိုင်
ဝင်ဘို့ပြောတိုင်း အိမ်ရှင်မနဲ့စကားများရတယ်ရှင့်ဗေဒင်ဟောခ ၆ ပြားတပဲနဲ့ မိသားစုမလောက်င
ကျွန်တော်က စာရေးတာဝါသနာပါတယ် စာမူခတလကို တပုဒ် ၄၀၀၀ နှစ်ပုဒ်ပါရင် ၈၀၀၀ အိမ်ရှင်
နောက်တော့ ကျွန်တော့ဝါသနာကိုအိမ်ရှင်မပြောမရတော့ မနက်ကို ဟောခန်းဖွင့် ၁၂ နာရီဆိုသိမ်းပြီး
ဟောခန်းငှားတဲ့လခ ပေးချိန်ကျရင် ကျွန်တော့်ခေါင်းမီးတောက်တဲ့အချိန်ဘဲ အိမ်ရှင်မလည်းမပြောရဲ
တပည့်တွေဆီလည်းအောက်ကျမခံချင် ဖြတ်သန်းရတဲ့ဝိဇ္ဇာခရီး ပင်ပန်းလွန်းပါတယ်
ကျွန်တော်က ပညာပါရမီ ရှိတော့ ဆရာကောင်းတွေနဲ့ဘဲတွေ့တာ သူတို့က အားပေးပါတယ်
ဝိဇ္ဇာလမ်း ဝိဇ္ဇာစခန်းတွေက ဒါးတောင်ကို ကျော်ပြီးမီးပင်လည်ကိုဖြတ်ရတဲ့အတိုင်းပါဘဲ
ရေးသားသူ Myat Htut Khaung at 7/29/2018 04:08:00 PM No comments:
ကျွန်တော်ဗေဒင်ဆရာဘဝ ( ၁၅ )
ကျွန်တော်တို့ရပ်ကွက်ထဲအင်မတန်လက်ပေါက်ကပ်တဲ့ ငနဲကြီးတစ်ဦးရှိတယ် ကောက်ညင်းပေါင်းစားပြီး
ပလွှေ မုတ်ရင်တောင် အဲဒီလောက်လက်ပေါက်မကပ်
ဘူး သူက အရင်ကစက်ချု ပ်တာ ခုတော့ပန်းထိမ်လုပ်
တယ် တနေ့တော့သူက ကျွန်တော်ကိုဇာတာစစ်ခိုင်း
တယ် သူက ၄ ကြွင်းသောကြာ စနေသက်ရောက်မှာ
အပြင်ရန် ကျွန်တော်က ခရီးဝေးမသွားဘို့တားလိုက်
တယ် သူက စပ်ဖြဲဖြဲနဲ့ သူဆင်ချင်ပါ့မယ်ပေါ့
ကျွန်တော်လည်း ဓမ္မ နဲ့ပတ်သက်လို့မတားလိုပါ
သွားပါ ကောင်းပါတယ်ပေါ့ ဒါပေမဲ့သိချင်တာတစ်
ခုက မာရဏ ရန်ခတ်နေတဲ့ ၄ ကြွင်းသောကြာ ဒီခရီး
သူသတင်းကိုလည်း အချိန်နဲ့အမျှ စောင့်ကြည့်နား
ကျို က်ထီးရိုးကတဲ့ ကျွန်တော်လည်း သူ့ဇနီးဆီမြန်
မြန်သွားလိုက်ပါတယ် သိချင်နေတာ ဒီသက္ခတ်ရဲ့
သူ့မိန်းမက အိမ်ထဲတောင်မဝင်ရသေးဘူး ကိုထွဋ်
ရေ ပြဿ နာတော့ပေါ်ပြီ ဟင် '' ဘယ်လိုဖြစ်တာ
လည်းအမကြီး ဟိုကိုယ်တော်လေ ကျို က်ထီးရိုး
တောင်ခြေ ကင်ပွန်းစခန်းမှာ မုန့်ဟင်းခါးစာပြီး
ပါဝါ အအေးသောက်လိုက်တာ အစာအဆိပ်သင့်
သွားတယ် ဝမ်းတွေရှောပြီးကျိုက်ထို ဆေးရုံရောက်
အင်း အပြင်ရန်မာရဏက ဇာတိပြပြီ အဖြေထွက်
တော့ ရှင်ဥပ္ပဂုတ္တ ကန်ဘောင်မှာတဲ့
မှာ ဘာသာရေးလုပ်ချင်ရင် အိမ်မှာလုပ်ပါ လူသူကင်း
တဲ့နေရာမှာ မလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောတော့ သူကစပ်ဖြဲဖြဲ
နဲ့ရပါတယ် ကိုယ်ထွဋ်ရယ် ကျွန်တော်က ဘာသာရေး
လုပ်တာဘဲတဲ့ ကျွန်တော်မှာ ဘာသာရေးကိစ္စကို
ဒီလိုနဲ့ တလလောက်အကြာ သူ့အိမ်ကိုကျွန်တော်
မရှိဘူး အင်'' ဘယ်သွားလည်းအမကြီး ဘယ်မှမသွားဘူး ရွာသာကြီးစိတ္တဇ ဆေးရုံကိုပို့လိုက်ရတာ
လည်းမသိပါဘူး ကြောင်တောင်တောင်နဲ့ ဖြစ်နေ
အင်း -- -- - - - ဖြစ်ရလေ ကိုအဝှာရယ်
ရပ်ကွက်ထဲကျွန်တော်နဲ့ခင်တဲ့ ၂ ကြွင်းကောင်မလေး
တစ်ယောက် ရှိတယ် တယူသန်တဇွတ်ထိုးလေးပေါ့
မယ် ဟေ '' ကောင်းသားဟ မျက်စိနောက်သက်
သာတာပေါ့ အင်- - - -မဟုတ်ဘူးလေ ကိုကိုဆရာ
စနြေ္ဒာချိန်ကြီး သူ့မွေးနံ စနေ ဝတ်လာတာအနီ
ဟင့်အင်း ဟင့်အင်း မရဘူး ကိုကိုဆရာ ခုတွက်
ရော'' ခက်ပါပြီ မိန်းခလေးရယ် ကဲကဲ ညီးကိုဟော
ပေးမယ် ဒီနှစ်ထဲ အိမ်ထောင်ပြုမရဘူး ကွဲကိန်းရှိတယ်
အင် '' ကိုကိုဆရာကလည်း မိဘခြင်းတောင်ပြောပြီး
ပြီ အေးလေ ညီးက ဟောဆိုတော့ ငါလည်းဟော
×××× ×××× ×××× ×××××××××× ×××>
ဒီလိုနဲ့ ၃ လလောက်ရှိတော့ ဟောခန်းထဲအမျိုးသမီး
ဟင် '' မင်း ! မင်း ! ဟိုတစ်ယောက်''
ဟုတ်ပါတယ် ကိုကိုဆရာ ကိုကိုဆရာစကားနား
မင်္ဂလာဆောင်ပြီးဆွေပြမျိုးပြ သူ့အမျိုးတွေရှိတဲ့ရွာ
သွားတာ လမ်းမှာ ကားမှောက်တာ အမျိုးသားက
ပွဲခြင်းပြီးဆုံးတာ ကျွန်မကတော့ ပေါင်မှာစတီးရိုး
အပိုင်း ၁၆ မျှော်ပါ
ရေးသားသူ Myat Htut Khaung at 7/20/2018 02:13:00 PM No comments:
ကျွန်တော်ဗေဒင်ဆရာဘဝ ( ၁၇ )
စွင့်ကားပြီး ဖွင့်ထွားတော့ ပုရိသတွေကြားရေပန်းစား
မိခိုင်လို့ဘဲခေါ်တာ သူ့အမည်ရင်းကကြည်ဖြူ ခိုင်
မြိုက်မြိုက်ကြီးရောက်လာပြီး ဟဲ့ ထွဋ်ကြီး ငါနင့်ဆီ
အင်း '' မိခိုင်ကတော့ငါ့ကိုလာရစ်နေပြီ
မရစ်ပါဘူးဟာ ငါ အတည်ပြောတာ ငါ့ကိုတွက်ပေး
ပါဟာ မနက်စာငါကြွေးမယ် ''
ဟဲဟဲ မနက်စာနင်ကြွေးမယ်ဆို ငါတွက်ပေးမယ်
အမယ်'' မိုက်သားဟ ဂျင်းစကပ်ကို တင်းကျပ်နေ
လည်း ငါမနေတတ်တော့ဘူး ''
အေးငါ့ သူငယ်ချင်းမတွေ့တာ အတော်ကြာပြီ
မွေးသက္ကရဇ်က 23. 1. 1969 ကြာသပတေး
၂ အကြွား ခိုက်
၅ ပန်းရောင် မွေးနံ
ဟဲ့မိခိုင် နင့်ယောင်္ကျား အိမ်ပေါ်ကဆင်းသွားတာ
လား ကျွန်တော်က ထိုသို့မေးလိုက်ရာ မိခိုင်က
ပြုံးစိစိနဲ့ ဟဲ့မိခိုင် ငါမေးနေတယ်လေ''
ကျွန်တော်က စိတ်မရှည်ဟန်နဲ့ ခတ်ဆတ်ဆတ်မေး
လိုက်မှ ထွဋ်ကြီးရယ်ဖြေးဖြေးပြောပါဟာ သူဆင်း
ဟင်'' ကျွန်တော့်အယူအဆ နဲ့သူဖြစ်နေတာက
တူသလိုနဲ့ မူကွဲနေတယ် တြိရန်းဌာန ကပျက်စီး
ခြင်းထွက်သွားခြင်း သူက နှင်ချလိုက်တာ
သူမအိမ်ထောင်ရေးက ရင်မောစရာ ယောင်္ကျားက
အရက်သမား ခလေးကနှစ်ယောက် ခုတော့
အချိန်က ဒုက္ခံလောကဓံ သူက နောက်တစ်ယောက်
ဟဲ့မိခိုင် နင်ယောင်္ကျားနဲ့ကွဲတာကွာတာက ဒီသက်
မိခိုင်နဲ့ မတွေ့တာ ကြာပြီပေါ့ သူ့ကိုတွက်ခဲ့တုန်း
က 16. 8 .2007 ခုဆိုရင် သူမ ဘာတွေဖြစ်နေမှာ
အိမ်ရှင်မနဲ့ နှစ်ယောက်လေ တနင်္ဂနွေနေ့ညနေ
ဘက်ကြီး ကုလားမင်္ဂလာဆောင်မှာ ဒန်ပေါက်
သွားစားကြတာ ကျွန်တော်က ဟေ့ရှင်မ ငါကစနေ
ဒန်ပေါက်ကစနေ ကုလားဆိုတာစနေ ၃ ဆင့်ကြီး
အိမ်ရှင်မက ရှင်ကလည်းလေ အလကားနေရင်
ဒီ တိုင်တွေတန်းတွေကြီးဘဲ လိုက်ချိန်နေတာ
ခိုက် ၃ ဆင့်မိတာတို့ဘာတို့ရှုပ်နေတာဘဲ
၁ တနင်္ဂနွေနေ့ညနေ ၅ နာရီ
၀ မွေးနံ ဒန်ပေါက် ကုလားအိမ်
ကျွန်တော်လည်း ပါချုပ် ဒါချုပ် ခေတ်စားနေချိန်
ဆေးခန်းရောက်သွားတော့တာဘဲ ၂ ရက် ၃ရက်
အပိုင်း ၁၈ မျှော်ပါ
ရေးသားသူ Myat Htut Khaung at 7/20/2018 02:07:00 PM No comments:
ကျွန်တော်ဗေဒင်ဆရာဘဝ ( ၁၂ )
ဆေးမတိုးဘူး ၁၀၈ နဝင်းလုပ်လိုက်မှပြန်ဖြေလို့ရ
တယ် ဆရာကိုမေးတော့ အာဏာစက် မရှိလို့
၁၀၈ အကာ သစ်စိမ့်တွဲနဝင်းနဲ့ ကာထားလိုက်မှ
အဖြစ်အပျက်က ဒီလို ဒီလို
တယ် အိမ်ကရှေးအိမ်ကြီး အဲဒီမှာထူးဆန်းတာက
ကမှာထားတယ် အဲဒီမှာ သူတို့ထဲကတစ်ယောက်
က ၄ ကြွင်းလားမသိပါဘူး စပ်စပ်စုစုနဲ့ သော့ပေါက်
ဟာ'' ထိုသွားခြောင်းသော လူငယ်မှာ ပါးစပ်
ထသွားသည် ထိုလူငယ် မနက်ရောက်တော့
ရမည်ကို သိလိုက်သည်နှင့် အလုပ်အပ်သောလူငယ်
သူတို့အားလုံးကို ခြေမန်းကွင်း စလွယ်ပညာခန်း
ကျွန်တော်က ဗေဒင်တတ်ခါစပေါ့ ဖလမ်းဖလမ်းဖြစ်
ဝုန်း ဝုန်း ဝေါ ဝေါ နဲ့အသည်းအသံရွာနေတာ
ဟေ့ ဘယ်သူလည်း ပစ်ထည့်လိုက်ရမလား
အော်လိုက်တာ ထိုသူမှ --- ----
ဆရာထွဋ် ကျွန်တေိာ အောင်ဝင်းပါ ''
ဟာ ကိုအောင်ဝင်း ညကြီးမိုးချုပ်ဘာလာလုပ်တာ
ဒီအချိန်ကြီးမှ -- -- --
မဟုတ်ဘူးဆရာထွဋ် နေ့ခင်းကတဲက ကျွန်တော်
ပျောက်တာ မသိလိုက်ဘူး အိမ်ရောက်ပြီးမှသိတာ
ကျွန်ုပ်သည် အချိန်တိုင်ကိုကြည့်လိုက်ရာ တနင်္ဂနွေ
၁ သူရဇ္ဇအခါ မွေးနံ
အင်တူလက်မျှ နဂိုရ်ပ တိုင်မှာ နေရာအရွေ့
လာဗျာ ကိုအောင်ဝင်း ကျွန်တော်တို့ဈေးခေါင်းရုံး
သွားရအောင် ဈေးပိတ်ပေမဲ့ ပြောပြရမှာပေါ့
ကိုအောင်ဝင်းတစ်ယောက်ကတော့ ၁၀ ရပ်ကွက်
ဈေးမှာ ခုထိ ငံပြာရေဆိုင်ဖွင့်တုန်း
ကျွန်တော်က ခုတော့ ဗေဒင်ဆရာဖြစ်လို့
အပိုင်း ၁၃ မျော်ပါ
ရေးသားသူ Myat Htut Khaung at 7/20/2018 02:02:00 PM No comments:
ကိုလွှမ်းမိုးက ငယ်ငယ်တုန်းကစိုးစိုးဘဝနဲ့ခုံခေါက်ပြီးသီချင်းဆိုတော့ ဆရာမက လက်ဆစ်တွေကိုခေါက်
တယ် ခုချိန်မှာ စတိတ်ရှိုး ပေါ်မှာသီချင်းဆိုတဲ့လွှမ်းမိုးကိုရှေ့ဆုံးတန်းမှာထိုင်နေတဲ့ဆရာမကဘယ်လိုလုပ်
xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
''ဟေ့လူ ကိုမြင့်အောင်ကြီး လာဗျာ ခင်ဗျားကိုကျွန်တော်လက်ဖက်တိုက်မယ်"
ဟာ ကိုထွဋ် ကတော့လုပ်ပြီဗျာ ခင်ဗျား လက်ဖက်ရည်တိုက်ပြီးကျုပ်ကိုဗေဒင်တွက်ဦးမှာ တော်ပြီဗျာ
မသောက်ဘူး နားဒုက္ခပေးဦးမှာ ဟုတ်တာလည်း
မဟုတ်ဘူး လူတကာကိုလက်ဖက်ရည်တိုက်ပြီးဗေဒင်လိုက်တွက်နေတာ "'တော်ပြီဗျာသွားမယ်''
"ဟေ့လူ ပါဦးဗျ" အာ ဒီလူတော့ "'
သုတ်သုတ် သုတ်သုတ်နဲ့ထွက်ခွာသွားတဲ့ ကိုမြင့်အောင်ခေါ်လို့လည်းမရ
လူတစ်ချို့က ကျွန်တော်ကိုဘွဲ့ပေးတယ် "ဗေဒင်ရူး"တဲ့ တချို့ကဆက်လုပ်ပါ အားပေးနေမယ်တဲ့
တချို့က လူလိမ်အလုပ်တဲ့ တချို့က ဒီကောင်လိုင်းကြောင်နေပြီတဲ့ >>>>
တချို့ကနောက်ကွယ်မှာ ဘာမှမတတ်ဘဲလျှောက်လုပ်နေတယ် ဆိုပြီးအပုတ်ချ ပြန်တယ် … …
ဒီလိုနဲ့ နေ့မအိပ် ညမအိပ် ကျမ်းစာတွေကြားပျော်ပါးနေခဲ့ … … …
စိန်ခေါ်မှု တွေ တစ်စတစ်စများလာပြီ တချို့ က ၂၀၀/ိပေးမယ် တွက်ပေးပါဟုပြောလာကြပြီ တချို့ကလက်
ဆက်လက်ပြီးကျမ်းစာတွေနောက် လျှောက်ကျမ်းစာတွေကိုဖေါက် သီအိုရီတွေနှောက် __ _ _
ပညာရှင်ပေါင်းစုံ လာရောက်တွေ့ကြ အမျိုးမျိုးစမ်းသပ်
ကြ အဲဒီလိုနဲ့မဟာဘုတ်လက်စွဲကျမ်း ထွက်လာပြီ
ခုတော့ ကျိုက္ကဆံဘုရားမှာ ဗေဒင်ဟောနေတဲ့ဆရာမြတ်ထွဋ်ခေါင် ဆိုတာ ရပ်ကွက်ထဲမှာဗေဒင်ရူး
လို့အမည်ရခဲ့တဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ဆိုတာဘယ်သူသိမှာလည်း ××× ×××× ×××××
ရေးသားသူ Myat Htut Khaung at 7/20/2018 01:01:00 PM No comments:
ကျွန်တော်ဗေဒင်ဆရာဘဝ ( ၂၄ )
ကျွန်တော်တပည့်တစ်ယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်နဲ့အသက်တူ အကြွင်းတူ နေ့တူဘဲသူက ကားမောင်းတယ်လေ ကျွန်တော်ဆီလာတွက်
တဲ့အချိန်က တနင်္ဂနွေချိန်ကြီး အဲဒီနေ့က သူ့အမျိုးသမီး စနေသမီးက လာတွက်တာ
၀ မွေးနံ သူဇနီးမွေးနံ
ကာယကံရှင်မွေးနံခိုက် ကိုယ်စားလှယ်မွေးနံခိုက်နှစ်ဆင့်ကြောင့် အမှု အခင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ယသောလောကဓံ သက္ခတ်အရ မိန်းခလေးတစ်ဦးနဲ့ပတ်သက်ပါတယ် လို့ပြောလိုက်တော့သူ့အမျိုးသမီးက ဆရာတဲ့ ထောင်တွေဘာတွေကျနိုင်ပါသလားတဲ့ ကျွန်တော်က ခိုက်နှစ်ဆင့်ကြောင့် မလွတ်နိုင်ပါ ဒါပေမဲ့ အတတ်နိုင်ဆုံးကူညီပေးမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်
သူ့အဖြစ်က ထူးဆန်းတယ် သူက ကားမောင်းတာဒီအမျိုးသမီးက ငွေတိုးချေးတာ ကားသမားတွေလည်းသူ့ဆီက ငွေလှဲ့တယ်ထင်ပါတယ် တနေ့ဒီအမျိုးသမီးက သူ့ကို အိမ်ထမင်းစားဖိတ်တယ် သူ့ယောင်္ကျားမရှိတဲ့အချိန် ဒီလူက လည်းလိုက်သွားမိတယ် အဲဒီ
အကွက်နဲ့ဘဲ တရားစွဲခဲ့တာ သူကနဂိုရ်ထဲက သက်သေတွေဆင်ထားခဲ့တာ ရန်ညှိုးကတော့ ကျွန်တော်
လည်းသိပ်မသိဘူးကျွန်တော်လည်း ကိုယ့်တပည့်ဘက်ကိုအတတ်နိုင်ဆုံး နဝင်းပညာ နဲ့ ကာ ကု ဖွင့် ကစားပေးလိုက်တယ်
ဒါပေမဲ့သူ ထောင်တနှစ်ကျသွားပါတယ် ထူးဆန်းပါတယ် နဝင်းတန်ခိုးလား သူ့ကံလားတော့မသိဘူး လွတ်ညိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးချိန်နဲ့ကြုံ နေလို့လပိုင်းနဲ့ပြန်လွတ်လာတယ်ပြောချင်တာက ပညာသင်တွေ သတိထား ခိုက် ၂ဆင့်ကိုသွားပြီး အာမခံနဲ့ ကျမှာဘဲ ကိုယ့်ဘက်ကစကား ခံထားကျွန်တော်က အတွေ့အကြုံများနေပြီ တခါတုန်းကခလေးလေးတစ်ယောက် ခွေးကိုက်ခံရတာ ကျွန်တော်ဆီလာအကူအညီတောင်းတယ် ကျွန်တော်လည်း ခိုက်နှစ်ဆင့်ကိုမကြည့်ဘဲ ကူညီလိုက်မိတာနောက်ပိုင်း ခလေးဆုံးသွားတော့ ရပ်ကွက်ထဲ သူက သတင်းလိုက်ဖြန့်တာ ကျွန်တော့်ယတြာကြောင့်ဆိုပြီး ကူညီတာလည်း ကူညီပေါ့ခိုက်ကိုလည်းမမေ့နဲ့
ကျွန်တော့ မိတ်ဆွေတစ်ယောက် ခုလိုတပေါင်းလကြီးဖိနပ်မပါဘဲ ကျွန်တော်ဆီရောက်လာတာ ဟေ့လူဒီလောက်နေပူတာ ခင်ဗျား ဘာလို့ဖိနပ်မစီးတာလည်းလို့မေးတော့ ကျွန်တော် စနေသက်ရောက်ရောက်နေလို့ ဗေဒင်ဆရာက ဖိနပ်မစီးဘဲ မွေးနေ့မှာတရက်လုံး
နေခိုင်းတာ ကျွန်တော်က ခင်ဗျား နွေရာသီမှာဖိနပ်မစီးဘဲ နေပူထဲလျှောက်သွားတာ အန္တရယ်များပါတယ်ကိုယ့်ညဏ်နဲ့စဉ်းစားပါလို့ပြောလိုက်တယ်မကြာပါဘူး တစ်ပတ်ပါဘဲ ဒီလူ ဆေးရုံရောက်သွားတယ်
သဘာဝ တရားရဲ့ လှို့ ဝှက်ချက်ဆိုတာရှိတယ်တခါတုန်းက တပည့်တစ်ယောက် မိတ်ကပ်လက်ဆောင်ရတယ်ဆိုပြီး လိမ်းလိုက်တာ မျက်နှာမှာအဖုအပိန့်တွေထွက်လာလို့ ဆေးခန်းသွားလိုက်ရတာဆိုလိုတာက ကိုယ်က စနေသက်ရောက် ကံနိမ့်နေတာ ပုံမှန်ဘဲသွားပါ မထွင်နဲ့ မကွန့်နဲ့ အေးအေးနေ အက္ခရာသင်္ချာနည်းနဲ့ကြည့် အနုပ်ကို အနုပ်နဲ့ခြေ အပေါင်းကိုအပေါင်းနဲ့ခြေ ရွှေ့လိုက်တာနဲ့အစားခံရမှာဘဲ
အပိုင်း ၂၅ မျှော်ပါ
ရေးသားသူ Myat Htut Khaung at 7/20/2018 12:50:00 PM No comments:
ကျွန်တော်ဗေဒင်ဆရာဘဝ ( ၈ )
ကျွန်တော်က ဗေဒင်သင်ချင်တာလက်ထဲမှာလည်းငွေမရှိတော့ ဆရာဆီမှာအကြွေးသင်ခဲ့ရတယ်သင်တန်းကြေးက ၃ သောင်း ၃ နှစ်လောက်ခွဲပေးမှကြေတယ် ဆရာကဘာမှမပြောပါဘူး သင်ပေးရှာပါတယ် ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ဂုဏ်သိက္ခာကျခဲ့ရတာဒီကောင် ဘာမှမတတ်ဘူး ဗေဒင်တောင်အကြွေးနဲ့သင်တာ ခုတောင်ကြွေးကျန်တွေရှိသေးတယ်မှတ်မိသေးတယ် ကျွန်တော်က ၂၀၀၁ ခုမှာသင်တန်းသေးသေးလေးတစ်ခုဖွင့်ဖြစ်တယ်သင်တန်းသား ၆ ယောက်လာတက်တယ် ပုတ်ခတ်တဲ့လူတွေက တစ်ပုံကြီး ကျွန်တော်က သင်တန်းကာလ ၆ လကိုပြီးအောင်ဖွင့်ဖြစ်သွားတယ်သင်တန်းသားတွေလည်း သင်တန်းလည်းပြီး ဇတ်ခေါင်းလည်းကွဲဘဲ ရီတော့ရီရတယ်အဲဒီတုန်းက လက်တွေ့တွေများတယ် ရွှေပျောက်ဆိုလည်း ချက်ချင်းလက်တွေ့ဖြေရှင်းရတာ ဘော်လုံးပွဲနှလုံးထီ ကျွန်တော်က အဲဒီလိုင်းကစတက်တာလက်တွေ့ဖြေရှင်းပြခဲ့တာ ကွက်တိတွေကြီးဘဲနောက်တော့ ဟောခန်းမှာဗေဒင်တွက်မည့်သူထက်မိုးလင်းရင်လောင်းကစားလုပ်မည့်သူတွေတန်းစီနေတော့ ဆရာကလာတားရတယ် မောင်ထွဋ်ရာဗေဒင်ဆရာဘဲလုပ်ပါလို့ --- --- -အဲဒီကတည်းက လောင်းကစား ကိစ္စရပ်သွားတာယူတော်မင်္ဂလာပညာ အဲဒီမှာတအားကျွမ်းကျင်သွားတာ ခုတော့မလုပ်တော့ပါဘူးတခါတုန်းက ကျွန်တော်လည်းဗေဒင်တတ်ခါစမြောက်ကြွမြောက်ကြွဖြစ်နေတဲ့အချိန် လက်ဖက်ရေဆိုင်မှာလူတစ်ယောက်က လက်ဖြောက်တီးပြီးကျွန်တော်ကိုဗေဒင်လာမေးတာ အချိန်က စနေချိန်ကြီး
၆ လှု ပ်လျှားမှု ခိုက်
သူ့မွေးနေ့ ခုနှစ်လည်းမပြောဘဲ ကျွန်တော်ကိုဗေဒင်လာမေးတာ လက်ဖြောက်တီးပြီးတော့ စီးပွားလုပ်ငန်းအဆင်ပြေနိုင်လားတဲ့ လှု ပ်လျှားမှု ခိုက်နေတဲ့စနေချိန် သူ့လှု ပ်ရှားနေတာ လက်ဖြောက်တီးသံခိုက်နေတာ ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြေမလည်း အကုန်ကုန်မယ်လို့ဟောလိုက်တယ်
ခုဆိုရင်အဲလိုဟောကွက်မျိုးမဟောရဲဘူး အဲဒီတုန်းကတတ်ခါစဆိုတော့ မြောက်ကားကြီးဖြစ်နေတာဒိုင်းကနဲ ဒိုင်းကနဲ ပြန်ဟောနေတာ ရိုက်ပေါက်တွေကြီးဘဲ မှန်လည်းမှန်တယ်လေ ဒီလူအကုန်ကုန်တာဘဲတခါတစ်လေ အင်္ဂဝိဇ္ဇာက တန်ဘိုးရှိတယ်ကျွန်တော့်အိမ်ရှင်မ ဆီးချိုဖြစ်ခါစ အင်္ဂါတိုင်သဘောအမြစ်အညွန့်မတွန့်စေရ ကစားကွက် နဲ့ခရေရွက်ကို၃ ခွက်တစ်ခွက်တင်ပြုတ်သောက်တာ ချက်ခြင်းဆီးချိုကျတယ် ခရေက အခါး အဖန်
၄ ရေ အညွန့်
၂ ခ အမြစ်
ကျွန်တော့်ကတနေ့က တနေ့ကအစားမှာတာနဲ့ဝမ်းပျက်သွားတာ ဆေးခန်းလည်းသွားတာပေါ့အင်္ဂဝိဇ္ဇာနည်း အောင်လံတေဇ သကျမှီအုန်း နည်းနဲ့နှမ်းဆီ ထန်းညက် ထမင်းစားတာချက်ခြင်းသက်သာတယ်
၀ နှမ်းဆီ ထန်းလျှက်
စနေနံ နှစ်ဆင့်နဲ့ဝင်သတ်လိုက်မှ ဝမ်းလည်းငြိမ်သွားတယ် စတုရန်းသတ်ကွက်က ကောင်းတယ် ကွမ်းစားလို့ထုံးပေါက်လည်းဆီသုတ်လိုက်ရင်ချက်ခြင်းသက်သာတယ်
ဟိုတုန်းကတော့ ဗေဒင်ဟောရတာရှက်သလိုပါဘဲခုတော့လည်း နေသားကျသွားပါပြီ
ရေးသားသူ Myat Htut Khaung at 7/20/2018 12:38:00 PM No comments:
ရေးသားသူ Myat Htut Khaung at 7/10/2018 09:30:00 PM No comments:
ကျွန်တော် ဗေဒင်ဆရာဘဝ ( ၇ )ဟိုးတုန်းကပေါ့လေ ကျွန်တေ...
ကျွန်တော်ဗေဒင်ဆရာဘဝ (၁)ဟိုးတုန်းကပေါ့လေ ကျွန်တော်တ...
ကျွန်တော် ဗေဒင်ဆရာဘဝ ၂၆ဟိုးတုန်းကပေါ့လေကျွန်တော်က ...